Tamberina Feral Tribune, gazety mpanesoeso malaza ao Kroasia efa nikatona · Global Voices teny Malagasy
Tamberina Feral Tribune, gazety mpanesoeso malaza ao Kroasia efa nikatona
Nalaza tamin'ny tsi-fitongilanana ilay gazety
Voadika ny 18 Jona 2019 5:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, srpski, Ελληνικά, English
Pejy voalohany an'i Feral Tribune ahitana an'i Franjo Tudjman sy Slobodan Milošević tamin'ny taona 1993, fanontana 1995 miaraka amin'ny filoha Bosniaka Alija Izetbegovic. Sary natolotr'i Lupiga sy Leo Niikolic, tao amin'ny BIRN.
Namoaka andian-dahatsoratra misy fizarana roa momba ny tantaran'ny Feral Tribune, gazety Kroaty ahitana esoeso sy tatitra fanadihadiana iadiana amin'ny kolikoly sy hampiroboroboana ny zon'olombelona nandritra ny taona maro nisavorovoroana tao Yogoslavia taloha i Balkan Insight.
Naorin'ny vondrona tanora mpanao gazety mpikomy tamin'ny taona 1993 mba hilazana ny marina amin'ny fahefana eo ambany fitondran'i Franjo Tudjman mpanao famoretana ny Feral Tribune ary nahavita nametraka laza tao amin'ny faritra tamin'ny fotoana niheverana ny gazety hampihatra fanivanan-tena “tia tanindrazana” ao amin'ny paikady nasionalista ara-politika.
Saingy ny fanerena ankolaka na mivantana ataon'ny mpitondra, toy ny fakana tamin'ny fomba rehetra ny trano famoahangazetin-dry zareo tany am-boalohany, sy ny fanenjehana ara-pitsarana marobe sy ny vola aloa any amin'ny fitsarana, no nahatonga ny gazety ho very mpanjifa (mpanao dokambarotra). Voatery nikatona tamin'ny taona 2008 ny gazety nony farany.
This is the story of how this legendary anti-establishment outlet went up against Croatia's 1990s regime: https://t.co/ZZCD0nGY5M pic.twitter.com/c0QJ467mZV
Dimy ambin'ny folo taona taorian'ny nanakatonana azy, mijanona ho mariky ny asa fanaovan-gazety mahaleotena ny gazety mpanesoeso malaza indrindra ao Kroasia, ny “Feral Tribune”.
Ity no tantara mikasika ny fomba nanoheran'ity fampahalalam-baovao malaza manohitra ny andrim-panjakana ity ny fitondrana Kroaty tamin'ny taompolo 90: https://t.co/ZZCD0nGY5M, pic.twitter.com/c0QJ467mZV
Nanazava ny fiorenan'ny Feral Tribune tany amin'ny tanàna morontsirak'i Split sy ny fomba nahavitany nametraka fiantraikany tamin'ny alalan'ny tatitra fanangonam-baovao tsy mitsikombakomba avy eny an-kianja ny tapany voalohany tamin'ny andian-dahatsoratra, tamin'ny alàlan'ny famoahana ny heloka be vava an'ady nataon'ny olona amin'ny ankolafiny rehetra tany Yogoslavia, ary nahitana sariitatra maneso eo amin'ny pejy voalohany iza manimbazimba ireo mpitarika nasionalista ao amin'ny fireneny sy ao amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy.
Ny fivoahan'ny sary namboarina (eo ambony),ahitana ireo mpitondra mpanambany vehivavy ao Kroasia sy Serbia mpiady, ary avy eo ahitana an'i Bosnia matory eo am-pandriana sady mifanoroka no nahatonga fahatezerana tao amin'ireo mpandala ny mahazatra.
Ny lohateny tamin'ny taona 1993 dia nilaza hoe ” Ity ve no iadiantsika?”, manondro ny adim-pahaleovantena Kroaty. Ny fitantarana ny 1995 kosa dia niteny hoe ” Io ve no ifamaliantsika? ” izay manondro ny dinam-pifanarahana tao Dayton.
Natao hanasongadinana ny fomba fijery malaza ny sary fa mifandona ny politisiana, manatanteraka ny ady ho fitaovana hanangonam-pahefana sy tombontsoa hafa. Avy eo izany toerana izany nohamafisin'ny Fitsarana Iraisam-pirenena ady heloka bevava.
Ho valifaty, niezaka nanery ny tonian-dahatsoratra Viktor Ivančić hiditra anaty tafika ny mpitondra. Ireo mpiara-miasa aminy no naneho ny ahiahiny fa mety ho tratran'ny tifitry ny namana izy, namoaka sary namboarina teo amin'ny pejy voalohany mitondra ny lohateny hoe ” Watch your back” [Jereo ny aorianao]. Raha ny fanazavan'ny mpamoaka lahatsoratra sady mpanao gazety Boris Dežulović ato amin’ity lahatsary ity, tsy azo terena ho miaramila ireo mpanoratra sy ireo mpanao gazety Kroaty tamin'izany andro izany. Noho ny alàlan'ny fanerena nataon'ny media iraisam-pirenena, noahafana tsy ho ao amin'ny tafika i Ivančić fotoana fohy taorian'izany.
Mitantara ny daka ambadika nataon'ireo mpitondra kroaty an'ilay gazetiboky anti-eshtablishment [tsy tia ireo nahazo ny fahefana sy/na ny harena] malaza, mpanesoeso, tamin'ny alàlan'ny fampandaniam-bola tamin'ny alalan'ny fanenjehana ara-pitsarana sy ny karazan-ketra maro, izay nanery azy hikatona ihany tamin'ny taona 2008 ny fizarana faharoa tamin'ny andian-dahatsoratra. Fanaon'ireo fitondrana mpamoritra manerana an'i Balkans tamin'ny taompolo 1990 sy tamin'ny fiandohan'ny taompolo 2000 izany maodely mamely ireo media mpitsikera izany, ary tafiditra ihany koa ny fandrahonana ireo mpanao dokambarotra an-gazety . Tamin'ny 2007, nandrakitra ireo andro faramparany tamin'izany tolona izany ny Global Voices, sy ny fihetseham-pon'ny bilaogera.
Nahazo ny lokan'ny fampijoroana herim-pon-tsivily Duško Kondor i Ivančić izay tonian-dahatsoratry ny Feral Tribune tamin'ny taona 2012. Nilaza ny loharanom-baovao hafa ao amin'ny aterineto fa “fitaratry ny fiarahamonina am-pivoarana” ny fitantarana ireo fisehoan-javatra ireo, lohatenim-pilma fanadihadiana fohy izay nitranga tamin'izany fotoana io ary navoaka sy nahitana dikan-teny tamin'ny teny anglisy nataon'ny Gariwo, fikambanam-panaovantsoa ara-panabeazana Bosniaka.
Tao amin'ny fanadihadiana, nanamafy ny filoha kroaty teo aloha Stipe Mesić fa nanana fifandraisana mivantana tamin'ny telefonina tamin'ny filoha Serba Slobodan Milošević tao amin'ny biraony ny filoha teo alohany, Tudjman.
Nahatadidy ny nividianako ny kopia voalohany amin'ny Feral Tribune tamin'ny taona 1993 aho tao amin'ny magazay mpivarotra gazety iray tao Makarska. Nandositra tamiko ny tena fonony, fa niparitaka nanerana ny pejy tsirairay.ny endriny dia sy ny hatsikany manapa-(tsinay). Namirapiratra teo amin'ny manodidina. Mahatsiaro an'i Predrag Lucić aho. 1964-2018.https://t.co/YohGs7t1Kj
Maodely ho an'ny gazety tsy miankina amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina ny Feral Tribune, toa an'i Fokus avy any Skopje, niorina tamin'ny taona 1995, izay niatrika fanamby toy izany nandritra ny fotoana nisamborana fanjakana tany Makedonia Avaratra. Na izany aza, dia tafavoaka velona izy ary mbola mampiasa fanamboarana sary sy tantara an-tsarin'ny mpanao politika.